အတွေ့အကြုံများကဘာတွေလဲ။ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
ဘဝသည်အတွေ့အကြုံများ၊ လမ်းတစ်လျှောက်ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးသင်လမ်းတစ်လမ်းသို့လျှောက်သွားစေသောအတွေ့အကြုံများအားလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းတို့အနက်အချို့ကိုရွေးချယ်ပြီးအပြုသဘောသို့မဟုတ်အနှုတ်လက္ခဏာများဖြစ်နိုင်သည်၊ အချို့မှာခန့်မှန်းရခက်။ အချိန်မရွေးပေါ်ပေါက်နိုင်သည်။ သို့သော် အားလုံးနေထိုင်ခဲ့အတွေ့အကြုံများအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုသင်ယူမှုရှိသည်။ သင့်ကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့မှတ်ဥာဏ်နဲ့ချန်ထားခဲ့သူ၊ သင့်ကိုထိခိုက်နစ်နာစေပြီးအချို့သောအရာများကိုမလုပ်နိုင်စေသူများလည်းပါပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်နောက်ဆုံးတွင်တစ်ခုစီသည်နှစ်များတစ်လျှောက်စုဆောင်းမိသောအချိန်လေးများမှပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
အတွေ့အကြုံများသည်မိမိကိုယ်ကိုငြင်းပယ်ခြင်း၊ အပြစ်ရှိသည်ဟုခံစားရခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားအန္တရာယ်ဖြစ်စေသောအနုတ်လက္ခဏာခံစားချက်အမျိုးမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မတူညီသောအကြောင်းပြချက်များကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုရှက်ရွံ့ခြင်းသို့မဟုတ်ဆင်းရဲခြင်းဖြစ်စေသောအတွေ့အကြုံများကိုကျွန်ုပ်တို့၏မှတ်ဉာဏ်နက်နဲသောအရပ်၌ဖုံးကွယ်လေ့ရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ဒီတွေ့ကြုံမှုတွေဟာဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတစ်နည်းနည်းနဲ့တော့ \_ t ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အသုံးပြုသင့်သည်.
အဲဒီခံစားချက်တွေကိုဖုံးကွယ်ထားမယ့်အစား၊ ဒီအတွေ့အကြုံတွေကငါတို့ကိုမှတ်သားထားတယ်၊ လေ့လာပါ သူတို့အားအခြေအနေများမှတ်ဉာဏ်နိုင်အောင်သူတို့ကို resignifying သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကအနုတ်လက္ခဏာမဟုတ်ဘဲအပြုသဘောဆောင်တဲ့ခံစားချက်ကိုထုတ်ပေးတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ သင့်မှတ်ဉာဏ်ထဲ၌သင့်ကိုအကြီးအကျယ်နာကျင်စေသည့်အတွေ့အကြုံတစ်ခုရှိပြီးသင်မှတ်ဉာဏ်ကသာသင့်ကိုဒုက္ခရောက်စေသည်ဆိုပါက၎င်းကိုသင်လေ့လာခဲ့သောအတွေ့အကြုံတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဒီတော့ဒီအတွေ့အကြုံကသင့်အတွက်ဖန်တီးပေးသောဆင်းရဲဒုက္ခများလျော့နည်းသွားပြီးနောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်သင့်အားပြtroubleနာများမှလွတ်မြောက်ရန်နှင့်ရှေ့ဆက်သွားရန်ကူညီသည်။
အချို့သောသူများသည်ဤအခြေအနေများကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးဘဝအတွေ့အကြုံများမှသင်ယူရန်စွမ်းရည်ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်သူတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုပြန်လည်အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရန်သင်ယူကြသည်။ သူတို့ကသင်ယူရေးကိရိယာတွေဖြစ်လာအောင်ပေါ့ရှေ့ဆက်သွားရန်တားဆီးသောကျောက်များအစား။ ဤအတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေရန်ဆုံးဖြတ်သူများသည်တစ်ခါတစ်ရံအခြားသူများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အကြောင်းမှာသူတစ်ပါး၏အတွေ့အကြုံများမှတစ်ဆင့်လူတစ် ဦး သည်ဖော်ထုတ်ခံရပြီးအချို့သောမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်ခက်ခဲသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ရတာအတူတူမဟုတ်ဘူး၊ သူကဇာတ်ကောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိတာကပထမလူနဲ့တွေ့တာထက်။ အတွေ့အကြုံများဆင်တူသော်လည်း, အခြားသူတစ် ဦး နှင့်အတူဖော်ထုတ်ခံစားမှုများသောအားဖြင့် link တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မလွှဲမရှောင်သာသင့်ကိုဆွဲဆောင်တဲ့စွမ်းအားတစ်ခု။ အကယ်၍ ထိုသူသည်ထိုအခြေအနေကိုကျော်လွှားနိုင်ပါကတစ်စုံတစ် ဦး ကသူတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေနိုင်သောကြောင့်သင်နှင့်သင်အားလုံးဖြစ်လိမ့်မည်။
ဤစာမျက်နှာတွင်သင်သည်အခြားသူများ၏လှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေနိုင်သောအတွေ့အကြုံများနှင့်အတွေ့အကြုံများမှဤစာမျက်နှာများနှင့်သင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ လူအတော်များများသည်တစ်စုံတစ်ရာသောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်အခြားသူများ၏အတွေ့အကြုံများကိုအသုံးပြုကြသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဝိဇ္ဇာမလုံခြုံမှုကိုထုတ်ပေးပါတယ်သို့သော်အခြားသူတစ် ဦး သည်အလားတူလုပ်ရပ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိထားခြင်းကသင့်အားအံ့အားသင့်စေသည့်အချက်ကိုဖယ်ရှားပေးသည်။
ဤအရာအားလုံးသည်ဤအပိုင်း၌ကျွန်ုပ်တို့ပြောသောအရာများဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံများနှင့်အခြားလူများနေထိုင်ခဲ့သည့်အတွေ့အကြုံများမှသင်ယူခြင်းဖြစ်သည် သင်ယူမှုနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွက်ကိရိယာတစ်ခု။ သင်ရှာဖွေနေသည်မှာသင်၏တိုးတက်မှု၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုမိုလုပ်ဆောင်ရန်နှင့်မိမိကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးဗားရှင်းကိုရှာဖွေရန်မိမိကိုယ်ကိုပိုမိုသိရှိခြင်းဖြစ်ပါကလမ်းကြောင်းသည်သင်ယူခြင်းဖြစ်သည်။
သင့်ဘဝ၌ရှိသောပြhaveနာအချို့ကိုတန်ဖိုးထားတတ်ရန်သင်ယူပါ၊ သူတို့မည်မျှအရေးပါသည်ကိုသင်မသိပါ။ မိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားတတ်ရန်သင်ယူပါ၊ မိမိကိုယ်ကိုချစ်ခြင်း၊ သငျသညျခြွင်းချက်သောအပြုသဘောဆောင်သောရှုထောင့်အဲဒါဟာဘယ်တော့မှမပြီးဆုံးနိုင်တဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့အလုပ်တစ်ခုပါ။
သင်၏အတွေ့အကြုံများသည်သင်၏ဘ ၀ အတွက်တိကျသောတန်ဖိုးရှိသည်သူတို့ကိုသင်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်သင်လက်ခံနိုင်စေရန်၎င်းတို့အနက်အချို့ကိုနားလည်ရန်သင်ကြားသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒီလိုမှသာမင်းဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလက်ခံသလိုလက်ခံပြီးသင်လုံးဝကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုမခံစားရတဲ့ဒီရှုထောင့်တွေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်မှာပါ။
၁၉၃၁ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်တွင်လူသား၏တီထွင်မှုအများဆုံးတီထွင်သူများထဲမှစာရေးဆရာသောမတ်အက်ဒီဆင် ...
por မာရီယာဟိုဆေး Roldan လွန်ခဲ့တဲ့4အနှစ် .
သင်ဟာအထိခိုက်မခံတဲ့လူတစ်ယောက်ဆိုရင်၊ သင်ဟာ Reiki နဲ့အဲဒီမှာရှိနေတဲ့စွမ်းအင်တွေကိုစိတ် ၀ င်စားပါလိမ့်မယ်။
သင်၏သွားများပြိုလဲသွားသည်ဟုသင်အိပ်မက်မက်ဖူးပါသလား။ ၎င်းသည်မျှတသောဘုံအိပ်မက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမနှစ်မြို့ဖွယ်ရာလည်းဖြစ်သည်။ ဘို့…
por အမဲန်ဒါ လွန်ခဲ့တဲ့4အနှစ် .
ကျွန်ုပ်တို့၏လှပသောကမ္ဘာဂြိုဟ်သည်ဗိသုကာပညာ၊ ရှေးခေတ်နှင့်ခေတ်သစ်သို့မဟုတ်သဘာဝအရအံ့ဖွယ်အမှုများစုစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ပုံစံအတွက်အတိအကျ ...
Oligodendrocytes: Neuron ကိုထောက်ပံ့နေတယ်
လူ့ ဦး နှောက်ကိုရည်ညွှန်းသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုနှင့်အသိဥာဏ်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်အာရုံခံဆဲလ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီ…
ငါတို့သိပြီးသည့်အတိုင်းကမ္ဘာပေါ်ရှိသက်ရှိသတ္တဝါများအားလုံးသည်စွမ်းဆောင်နိုင်ရုံသာမကအသက်ရှူဖို့လည်းလိုသည်။ အဲဒါအရမ်းကို ...
ဤအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်နေ့တာသည်ပိုမိုမြန်ဆန်လာသည်။ အလုပ်များ၊ ကျောင်းများနှင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့် ...
အကယ်၍ လူတစ် ဦး တစ်ယောက်သည်သူတို့၏စွမ်းရည်များနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများကိုအလွန်သတိထားမိသည့်အခြေအနေတစ်ခုအကြောင်းပြောဆိုပါက ...
amensalism ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ပတ်ဝန်းကျင်တွင်မည်သို့ဖြစ်ပျက်သနည်း။
သဘာဝတွင်မျိုးစိတ်ဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှု၏ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအယူအဆကိုအမြဲတမ်းပေးထားသည်။ လောလောဆယ်လူသိအများဆုံး ...
epistemology ကဘာလဲ, ကဘာလဲဆိုတာနှင့်၎င်း၏အရေးပါမှုကဘာလဲ?
အမ်ဖီတမင်း (Amphetamine)၊ ၎င်းသည်မည်သည့်အရာ၊ အမျိုးအစားများနှင့်၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများလဲ
စိတ်ခံစားမှုများနှင့်ခံစားချက်များကိုစီမံခြင်း - လမ်းညွှန်ချက် ၁၀ ခု